ကြားဖြတ်သတင်း – ရိုဟင်ဂျာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ဦး အသတ်ခံရ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကြားဖြတ်သတင်း – ရိုဟင်ဂျာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ဦး အသတ်ခံရ
ဘူးသီးတောင် ။ ။ ယနေ့ (မတ်လ ၁၂ ရက်) နံနက် ၁၂း၃၀ (သန်းခေါင်ယံ) နာရီတွင် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်၊ သရက်ပြင် ကျေးရွာတွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ရိုဟင်ဂျာ လူငယ်တစ်ဦးကို လူမဆန်စွာ သတ်ဖြတ်ပြီး စိုင်းတင်ချောင်းထဲသို့ ပစ်ချလိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
“သစ်တောဌာန ၀န်ထမ်းတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဦးအလီက သူရဲ့သားဖြစ်တဲ့ ဒုတိယနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်း သား အီလီယာစ် (ခ) မောင်သန်းလှိုင်ကိုပါ ခေါ်ပြီး သရက်ပြင် ကျေးရွာမှာ ရှိတဲ့ သစ်တောကင်း စခန်း မှာ တာ ၀န်အရ ကင်းစောင့်နေတဲ့ အချိန်မှာ စိုင်းတင်ရေတံခွန် ဘက်ကနေ ရခိုင် အကြမ်းဖက် သမား (၁၂) ယောက်ဆင်းလာပြီး ၀င်ပြီးတိုက်ခိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဦးအလီကတော့ ထွက်ပြေးလို့ လွတ် သွား ပေ မယ့် သားဖြစ်သူ အီလီယာစ်ကတော့ ရက်ရက်စက်စက် ဓါးနဲ့ ထိုးသတ်ခံရပြီး မသေမရှင်ဖြစ်နေတဲ့ အ ချိန်မှာ ခြေလက်တွေကို ကြိုးနဲ့တုပ်ပြီး စိုင်းတင် ချောင်းထဲကို ပစ်ချလိုက်တယ်” ဟု ဘူးသီးတောင် မြို့ နယ် ဒေသခံတစ်ဦးမှ RB News သို့ပြောပါသည်။
လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံ လိုက်ရသည့် အီလီယာစ်၏ အလောင်းကို ယခုအချိန်ထိ ရှာဖွေ မတွေ့ရှိ သေးကြောင်း သိရပါသည်။
“ရခိုင် အကြမ်းဖက် သမား (၁၂) ယောက်ထဲမှာ မြို့နယ် လ၀ကဌာနက အောင်စံသိန်း၊ မြို့နယ် မြေ စာရင်း ဌာနက သန်းတင်၊ မြို့နယ် သစ်တောဌာနက လှထွန်း၊ တင်စိုး (ခ) သိန်းစိုးနဲ့ အောင်မြင့်၊ မြို့နယ် စိုက် ပျိုးရေး ဌာနက ဇာနည်အောင်နဲ့ နေလင်း၊ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနက စံသိန်း နဲ့ အခြား အမည်မသိ လေးဦး တို့ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကတော့ လ၀ကဌာနက အောင်စံသိန်းပါ။” ဟုအဆိုပါ ဒေသခံမှ ဆက်လက်ပြောပါသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာများအား တိုက်ခိုက်၍ လူမျိုးရေး ပြဿနာ ဖန်တီးနေသူများမှာ အဓိက အားဖြင့် ရခိုင်လူမျိုး အစိုးရ၀န်ထမ်းများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ၀န်ထမ်းများထဲတွင် လ၀ကဌာနမှ ၀န်ထမ်း များသည် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို သန့်စင်ပစ်ရန် အ ချက်ပြပြီးနောက် ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့တွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက်များက မွတ်စလင်များကို တကွဲ တပြား တွေ့ ရှိလျှင် သတ်ဖြတ်၍ အလောင်း ဖျောက်ပစ်ခြင်းများ မကြာခဏ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများကို အရေးမယူဘဲ လွတ်ပေးထားသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်တို့မှာ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့လျက် ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ မင်းမဲ့စရိုက် ဆန် ဆန် သတ်ဖြတ်လျက်ရှိသဖြင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ မွတ်စလင်များ အထူးစိုးရိမ် ထိပ်လန့်လျက် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
This entry was posted on March 16, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဒေါက်တာ အေးချမ်းသို့ DHRP ပါတီမှ မေးမြန်း သည့် မေးခွန်းများ
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများလက်ရှိခံစားနေတဲ့လစာငွေ အပြင်ထပ်မံပြီး၂ သောင်းကျပ်တိုးပေးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တင်ပြ” … →